Nkọwapụta --lọ ọrụ - Tianjin Shangjuli International Trade Co., Ltd.
TIANJIN SHANGJULI INTERNATIONAL TRADE CO., LTDe hiwere na 1999, anyị nwere onwe anyị Factory na Shandong Province, Tianjin City, Zhejiang Province, Hebei Province; bubata ngwa ọrụ dị elu na teknụzụ iji mepụta ụdị akpụkpọ ụkwụ, brik, osisi osisi siri ike na ihe ndị ọzọ. Mgbe ọtụtụ afọ nke ike ọhụrụ na omume, anyị ụlọ ọrụ kpụrụ a zuru set nke mmepụta usoro, management na nnyocha iwu. Anyị nwere mmepe nke onwe anyị na otu ule nyocha iji gosipụta ogo ya:
Ngwaahịa anyị gụnyere akpụkpọ ụkwụ nchekwa, akpụkpọ ụkwụ ndị agha, akpụkpọ ụkwụ egwuregwu, brik na-acha uhie uhie, brik ọkụ ọkụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ puku ụdị.
N'elu elu mma na asọmpi ahịa, anyị na ngwaahịa na-ere na anụ ụlọ na exported na Chile, Itay, England, Poland, Spain, France, Germany, Czek, Russia, America, Japan, Singapore, wdg
Anyị nwere asatọ mmepụta edoghi maka akpụkpọ ụkwụ: sikwuo edoghi, Pu injection ahịrị, Goodyear welted edoghi; E nwere ụlọ mmepụta ihe 3 nke brik na osisi osisi siri ike na Shandong Hebei na Tianjin. Zuru ezu ụlọ mmepụta ihe na ngwaahịa maka ndị ahịa ịhọrọ ma lelee.
Iji gosi na ngwaahịa na-ezute ahịa mkpa anyị na-eme ule akụkọ nke OA akwụkwọ, ISO9001 usoro akwụkwọ na na; Anyị nwekwara ngalaba nyocha nke anyị iji nwalee ngwaahịa ndị a ma ọ bụrụ na ọ dabara ihe ndị ahịa chọrọ. ihe anyị mere nke ahụ na-enweta ntụkwasị obi n'aka onye ahịa.
Anyị factory na-esote Beijing, nke ahụ bụ mfe bulie ahịa si n'ebe; Ugbu a anyị nwere mmadụ 1500; ngalaba na-emepe emepe enwere 100; mma apụ e nwere mmadụ 80; ndị ahịa ahụ na-apụ 50; Anyị nwere ike ịzụlite ọtụtụ ọhụụ ọhụrụ kwa afọ na-eso ahịa na mkpa ndị ahịa;
Companylọ ọrụ anyị ga-aga ụlọ ahịa canton, CIFF, SNIEC, Kwa afọ; anyị na-anyị ọhụrụ imewe akpụkpọ ụkwụ na brik na ngosi; Nabata iji lelee ngwaahịa anyị na ngosi. Chọrọ ohere ịmekọrịta azụmahịa ọnụ ma nyere gị aka ịme nke ọma, daalụ.
Steel Capkwụ Cap N'ihi Safety Shoes, Men Safety Shoes Steel Mkpịsị ụkwụ, Safety Shoes Steel ụkwụ Mkpịsị, Brahma Steel Mkpịsị ụkwụ Safety Shoes, Akpụkpọ ụkwụ Nchekwa Ọkpụkpụ Nchara Ọkpụkpụ Nchara, Safety Shoes With Steel Mkpịsị ụkwụ,